Abakhiqizi basechina abakhiqizi basechina nabaphakeli | UMINYAN
Ukumelana okuhle kokugqoka, ukuphakama kwensizakalo ende, isakhiwo esilula nokugcinwa okulula.
Ukumelana okuhle kokugqoka, impilo ende yenkonzo, isakhiwo esilula nokugcinwa okulula. Isetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, izinto zokwakha, imboni yamakhemikhali, okusanhlamvu, imithi, umanyolo wamakhemikhali nezinye izimboni ukuhlolwa kwezinto.
Imikhiqizo ithunyelwe e-Southeast Asia, South Asia, Middle East, East Asia, South America nakwezinye izifunda, futhi ikhwalithi yomkhiqizo inkulu. Umthamo wokunikezwa kwenkampani ungalungiswa ngesikhathi nezidingo ze-oda.Imikhiqizo yethu ingafakwa kubo bonke abembayo, siphinde samukele amakhasimende sicela usithumelele imidwebo noma amamodeli we-excavator. Singumboni onolwazi lweminyaka eminingi ekusetshenzisweni komkhiqizo, kufaka phakathi amabhakede we-excavator izingxenye ze-OEM ziyatholakala.Iwaranti:Unyaka owodwa wewaranti yemishini
Amandla WokunikezelaAmandla Wokunikezela:50 Piece / Pieces Inyanga ngayinye ngesihlungo ibhakedeUkupakisha nokulethwaOkufakiwe YekuchumanaOkufakiwe Yekuchumana I-pallet ejwayelekile yomhlaba wonke noma icala lezinkuni. 1. i-20GP eyodwa ingalayisha cishe izingcezu eziyi-12-14 ama-1.0m3 noma ama-1.2m3 amabhakede we-20ton excavator (Ububanzi obungaphansi kwama-intshi angama-42)2. i-40HC eyodwa ingalayisha cishe izingcezu ezingama-26-28 1.0m3 noma ama-1.2m3 amabhakede we-20ton excavator;3. i-20GP eyodwa ingalayisha cishe izingcezu eziyi-8 1.6m3 amabhakede we-30ton excavator; 4. i-40HC eyodwa ingalayisha cishe izingcezu eziyi-16 1.6m3 amabhakede we-30ton excavator.
Ichwebashanghai / Lianyungang / QingdaoIsikhathi esiholayo :
Ubuningi (Izingcezu) 1 - 1 2 - 10 11 - 50 > 50
Est. Isikhathi (izinsuku) 8 30 55 Kuxoxiswane
Q1. Iyini intengo yakho enhle kakhulu?A: Singabantu imboni eqondile izokunikeza intengo engcono kakhulu yokuncintisana.Q2. Ngingaxhumana kanjani nawe? Ngabe kufanele ngikuthembe?IMP: Ungakhetha isiqinisekiso sezohwebo njengendlela yakho yokukhokha engavikela izinzuzo zakho, siyisitolo sezinkanyezi ezintathu se-Alibaba.Q3. Yini isikhathi sokukhokha?A: Inyunyana yaseWestern, T / T, isiqinisekiso sokuhweba samukelekile.Q4: Luyoba nini usuku lwakho lokulethwa?A: Ngokuvamile izinsuku ezingama-25-30 ngemuva kokuthola inkokhelo yakho, futhi sizozama konke okusemandleni ethu ukugcwalisa izidingo zakho. Sigxila enkolelweni yokuphatha ye- "Ikhwalithi yokuqala, Idumela elibalulekile, iKhasimende elisuselwe".
Langaphambilini Excavator rock ibhakede
Olandelayo: i-excavator ripper